Didier Drogba oo 34 jir ah ayaa laga yaabaa inuu u weecdo kooxda Barcelona ka dib maalmop uun markii uu si rasmi ah ugu biiray kooxda reer China ee Shanghai Shenhua. Sida ay qortay Daily Mail.
Manchester City ayaa diiradu u saaran tahay ciyaaryaahanka Newcastle Fabricio Coloccini iyo Difaaca Liverpool Daniel Agger waxaana macquul ah inay bedelaan Joleon Lescott oo 29 jir a, kaasoo laga yaabo in da’da oo ka daba timid uu ka tago Etihad Stadium sida ay qortay Talksport .
Chelsea ayaa u weecatay dhinaca Germany iyadoo kooxda Bayer Leverkusen ka dooneysa ciyaaryahanka garabka ka ciyaara Andre Schurrle oo 21 jir ah ka dib markii ay burbureen wadahadaladii ay kusoo iibsan lahaayeen Victor Moses sida ay qoreyso The Metro.
Kooxda ka dhisan caasimada Talyaaniga Lazio ayaa ku dhow inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka diiradu u saaran tahay kooxda reer England West Ham iyo Tottenham ee Burak Yilmaz oo 26 jir marka loo fiirsho ah sida ay soo tebinayaan saxaafada Italy sida ay qortay Talksport.
Ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Chelsea Raul Meireles oo 29 jir ah ayaa waxaa 8 million oo ginni ku baaacsaneysa kooxda Serie A-da ka dhisan ee Napoli sida ay qoreyso Daily Mirror.
Kooxda Fiorentina ayau badan tahay inaysan iska fasixi doonin ciyaaryahanka diirada u saran kooxda Ingariiska ee Liverpool iyo Aston Villa Juan Manuel Vargas oo 28 jir ah, ka dib markii labada kooxood ay ku guuldareysteen inay bixiyaan lacagta ay ku dooneyso Viola ciyaaryahanka ee 12 milyan ginni. Sida ay qortay TalkSPORT.
U dhaqaaqitaanka Bayern Munich ee ciyaaryahanka kooxda Man City Edin Dzeko ayaa shaki la geliyey ka dib markii FC Hollywood ay diirada saareen weeraryahanka kooxda Wolfsburg Mario Mandzukic oo 26 jir ah sida ay qoreyso Daily Mail
Craig Bellamy ayaa rumeysan in imaatinka Liverpool ee Tababare Brendan Rodgers ay kor u qaadi karto kooxda laakiin Cardiff City ayaa diyaar u ah inay 32 jirkaan ka dhaqaajiyaan gegeda Anfield sida ay qortay Liverpool Daily Echo.
Atletico Madrid ayaa u sheegtay dhigooda Blues in weeraryahanka dalka Colombia Radamel Falcao oo 26 jir ah uusan iib aheyn qiimo walba oo loosoo bandhigo sida ay qoreyso The Sun
Kooxda Heysata EPL Manchester City ayaa iska diiday 18 million oo ginni inay ku iibiyaan difaacooda garabka bidix Aleksandar Kolarov oo 26 jir ah sida ay qortay Daily Star�
Kooxda Sunderland ayaa talaabo u qaaday 25 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Wolves Steven Fletcher sida ay qoreyso Daily Mail.